Fanamarinana - Sichuan Shuer Medical Devices Co, Ltd.
Sichuan Juneng dia mitazona ny fanahin'ny fanavaozana mitohy ary mandroso miaraka amin'ny Times, nahazo karazana mari-pahaizana isan-karazany, toa ny fanamarinana SGS, CE, NIOSH MSDS ary IS09001, tamin'io fotoana io ihany, nahazo patanty famoronana 2 pcs izahay, tamin'ny 2016, manana ny hajany izahay nahazo mari-pankasitrahana ara-tsiansa sy haitao "125" nasionaly.
Sichuan juneng dia tsy vitan'ny fanomezana vokatra marika tena tsara, fa afaka manao OEM ihany koa. Sichuan juneng dia manaraka ny paikadim-pirenena ho an'ny fampandrosoana "The Belt and Road", manaraka ny dingana ataon'ny firenena "Ny fampandrosoana ny faritra andrefana any Shina", mitaingina lamasinina manokana an'i Chengdu mankany Eropa. izahay dia nanondrana ny vokatray mihoatra ny 30 contries. Ny fanondranana dia mitentina 80% amin'ny totalin'ny varotra ataon'ny orinasa, ary ny anjaran'ny tsena anatiny dia mitombo isan-taona ihany koa.
Fahazoan-dàlana ho an'ny orinasa
Fanamarihana mialoha momba ny fanamarinana
Tatitry ny fitsapana PFE
Tatitry ny fitsapana BFE99
Tatitry ny fitsapana N95
Tatitry ny fitsapana SGS ffp2 KF 94
MELT-BLown FABRIC MSDS
Vokatra mafana - Sitemap - AMP Mobile Saron-tava tsy miendrika 3 Ply, Saron-tava azo ampiasaina 3ply, Saron-tava 3 azo ampiasaina miaraka amin'ny Fda, Saron-tava Ffp3, Saron-tava fandidiana ambaratonga 3, Saron-tava fandidiana 3ply,